ElaseZimbabwe ligxeke uMalema ngokuqhakambisa uMugabe | News24
ElaseZimbabwe ligxeke uMalema ngokuqhakambisa uMugabe
Cape Town - Iqembu eliphikisayo eZimbabwe i-MDC eliholwa uMorgan Tsvangirai ligxeke umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema ngokuqhakambisa uMengameli Robert Mugabe.
UMalema waphenduka undabamlonyeni ngeledlule ngesikhathi etshela izintatheli kwingqungquthela yabezindaba eGoli ukuthi izinkinga zaseZimbabwe azidalwa uMugabe kodwa zidalwa “ogombelakwesabo”.
“UMengameli uMugabe uyena yedwa umholi owaziyo ukuthi ukuze kube khona ushintsho kubantu base-Afrika kumele kube nobunzima nobuhlungu, nokuyinto eyenzakalayo eZimbabwe njengamanje,” etshela izintatheli.
UMalema uphinde wathi uMugabe uyisishoshovu soqobo njengoba esaqhubeka nokuhola iqembu lakhe ukuze kube nezinguquko zomnotho eZimbabwe.
OLUNYE UDABA: Unqatshelwe ibheyili owavuma ukufunza izingane iRattex
Iqembu likaTsvangirai i-MDC liyihlabile le nkulumo kaMalema njengoba okhulumela leli qembu u-Obert Gutu ethe lo mholi ukhuluma into angenayo ulwazi olugcwele ngayo.
Ngokubika kweDaily News uGutu uchaze uMalema njengonda enomqondo “ongathathi kahle”.
“Kuyacaca ukuthi lokhu okubhenywa uMalema sekuqala ukuba nomthelela ngendlela acabanga ngayo.
Ukuthi umuntu alibeke ngembaba ukuthi uRobert Mugabe akuyena okumele asolwe ngezinkinga zaseZimbabwe, lowo muntu kuyacaca ukuthi unengqondo engathathi kahle,” uGutu ecashunwa.